Qaar ka mid ah dhaawacyadii Tiyaatarka oo dibadda loo qaaday - Xusuus
Saturday, 7 April, 2012 I Latest Update 3:44 pm Home
Qaar ka mid ah dhaawacyadii Tiyaatarka oo dibadda loo qaaday
Dowlada KMG Soomaaliya ayaa maanta dalka dibadiisa u qaaday qaar ka mid ah dadki ku dhaawacmay qaraxi Tiyaatarka ka dhacay todobaadki hore kaasi oo galaaftay nolosha 11 ruux.
Wasiirka caafimaadka Soomaaliya, Dr. C/casiis Sheekh Yusuf ayaa sheegay in maanta la qaaday labadi ruux ee ugu darneyd dadka dhaawaca ah kuwaasi oo kala ah Xildhibaan Mowliid Macaani Maxamuud, iyo Feysal Xaaji Cilmi oo ka mid ah shaqaalaha xafiiska Ra’isulwasaaraha.
Feysal saakay ayaa dalka dibadiisa loo qaaday, halka Mowliidna duhurnimadi maanta uu ka dhoofay garoonka Adan Cade ee magaalada Muqdisho.
Sida ay wararku sheegayaan, xaalada xildhibaan Moowliid Macaani ayaa ah mid halis ah, waxaana ku kacay dhiiga isaga oo horay u qabay xanuunka loo yaqaano dhiig karka.
Dr. C/casiis Sheekh Yusuf, wasiirka caafimaadka ayaa sheegay in dhaawacyada kale sida saxafiyiinta kuwa daran ay noqon doonaa dadka ugu soo horeeyo ee dalka dibadiisa loo qaado.
Wasiirka ayaa ka gaabsaday inuu sheego dalka loo qaaday dhaawacyada labadaasi ruux, hase yeeshee warar soo baxayo ayaa sheegaya loo kaxeeyey dalka Kenya.
Wasaarada caafimaadka ayaa ku dhawaaqday in tiro koob ay sameeyeen ku ogaadeen in qaraxi Arbacada ay ku dhaawacmeen ilaa iyo 48 ruux.
Nistelrooy Oo Ka Naxay Markii Loo Sheegay Inuusan Boos Uga Banaaneyn Xulka Holland Ee Ka Qeyb Gelaya Qaramada Yurub Masuul Dowladda ka tirsan oo geeriyooday iyo Ra’iisul Wasaaraha oo tacsiyadeeyey Categories
xusuus Add a Comment on "Qaar ka mid ah dhaawacyadii Tiyaatarka oo dibadda loo qaaday"